Takoorida da’da | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In waayeel lagu noqdo dalka Iswiidan / Takoorida da’da
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay takoorida da’da, micnihii in adigu aanad helin fursado la mid ah kuwa dadka kale sababtoo ah da’daada. Waxaad akhrin doontaa wixii ku saabsan takoorida da’da ee nolosha shaqada iyo waajibaadka shaqo-bixiyaha saaran. Waxaad heli doontaa tusaale ah waxa ahaan kara takoorid dhinaca nolosha shaqada oo waxaad ogaan doontaa waxa aad sameyn karto haddii aad ay kula tahay in lagu takooray.
Waa maxay takoorida da'da?
Takoorida da'da micnaheedu waa in aanad heli fursado la mid ah kuwa dadka kale, sababta keliyana tahay in aad ka yartahay ama ka da' weyntahay dadka kale ee aad isku xaalad tihiin. Tani waxay soo bixi kartaa dhinaca waxbarashooyinka, shaqada, isbitaalka, maktabadda ama meelaha kale ee dadka kala da'da duwan ka qaybqaataan hawl isku mid ah. Iswiidhan waxaa mamnuuc ka ah takoorida da'da. Laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban. Tani waxay badanaaba khuseysaa carruurta iyo dadka da'da yar. Carruurta ka yar 18 sano tusaale ahaan ma codeyn karaan doorasho mana iibsan karaan khamri iyo toobaako.
Takoorida dhinaca nolosha shaqada
Dhalinyarada iyo dadka waayeelka ah labadaba waxaa ku iman karta takoorid da'da ah. Takoorida da'da ee nolosha shaqada waxay badanaaba ku saabsantahay in shaqo-bixiye rumeysanyahay in dadka waayeelka ah aanay si xoog ah u shaqayn karin sida dadka da'da yar, ama in dadka da'da yar aanay lahayn aqoon weyn oo la mid ah sida waayeelka.
Takoorida da'da ee nolosha shaqada waa dhibaato weyn, waxay ku tahay qofka ay ku dhacdo iyo shirkadda labadaba. Da'da lagu noqdo hawlgab ee Iswiidhan kor ayaa loo qaaday oo kor ayaa loo qaadi doonaa mar kale. Haddana dad badan dhinaca nolosha shaqada waxay dareemaan in la dooran waayay iyaga ay sabab u tahay da'dooda.
Adigu waxa aad xaq u leedahay in aad shaqayso ilaa inta aad buuxinayso 68 jir. Intaa wixi ka dambeeya waa in shaqo-bixiyahaagu ogolaado taas. Haddii aad bilaa shaqo noqoto waxa aad xaq u leedahay qasnadda shaqo la'aanta ilaa inta aad buuxinayso 65 jir.
Takoorida da'da way dhici kartaa isla xilliga da'da 40 sano marka aad raadinayso shaqo. Haween ka badan rag ayaa dhibaatadan ku dhacdaa.
Maxaa shaqo-bixiye iyo dadka shaqaalaha ahi samayn karaan si aan cidnaba loogu dhibin takoorida da'da?
Mararka qaarkood way adkaan kartaa in la ogaado haddii qofka lagu dhibay takoorid. Waxa kale oo qofka ku adkaan karta in uu cadeeyo in lagu takooray sababtoo ah da'diisa, tusaale ahaan haddii qofku aanu helin shaqo ama awoodin qaadashada amaah bangi. Mararka qaarkood waxaa qofka intaas u dheeraan kara in lagu takooray sababo dhowr ah oo kala duwan isku mar, tusaale ahaan da'da iyo jinsiga labadaba. Qofka takoorida sameeyay laga yaabee in aanu u samayn si ula kac ah. Laakiin haddana tani way ahaan kartaa takoorid.
Adigu waxaad xitaa warbixin iyo cabasho ku saabsan takooridan u gudbin kartaa Wakiilka ka hortaga takoorida (DO). DO waxay ugu horeyn isticmaashaa warbixinaha iyo cabashooyinkan si ay u eegto in sharciga la raaco ee maaha in la xaliyo xaaladaha dad gaar ah.
Maxaa adigu aad samayn kartaa haddii lagu takooro?
Akhri dheeraad ku saabsan takoorida iyo waxa ku xisaabsan takoorid kuna qoran bogga "Xuquuqda iyo waajibaadka" ee Informationsverige.se.